Home » Vaovao momba ny fizahantany » Hevitra feno faniriana ao amin'ny ITB momba ny fizahan-tany amin'ny fialantsasatry ny paska
Ny fisainana tsara no lakilen'ny fanarenana amin'ny ITB Berlin Ankehitriny,. Tsara lavitra ve ny fandinihana manome toky ny indostrian'ny fitsangatsanganana eoropeanina fa milamina ny Fetin'ny Paska ho avy?
Ny fialantsasatry ny paska tamin'ity taona ity dia mbola azo atao, na ny ao an-trano na ny any ivelany, ny tena ilaina dia paikady fitiliana manan-tsaina ho an'ny coronavirus. Izany no hevitra navoakan'i Norbert Fiebig, filohan'ny Fikambanana Mpandehandeha Alemanina (DRV) tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ITB Berlin. “Amin'ny aretin-tsaina Balearika dia 32 isaky ny 100,000 60, raha any Alemana kosa dia mihoatra ny XNUMX. Inona no atahorana raha mandeha any Majorca? Iza no te ho voaro amin'iza? Ampy izay ny toerana azo antoka ”, hoy i Fiebig. Ny fiarovana ny fahasalamana dia mora kokoa nalamina tamin'ny fitsidihana fonosana noho ny amin'ny fitateram-bahoaka any Berlin, hoy ihany izy.
Raha ny filazan'i Claudia Cramer, talen'ny Research Market ao amin'ny institiota fikarohana Statista, manodidina ny 70 isan-jaton'ny mponina ao Alemana dia nikasa ny hanao fitsangatsanganana tamin'ny taona 2021 i Etazonia sy i Shina. Ny fihaonana sy ny famoriana miaraka amin'ny namana sy fianakaviana dia mpamily lehibe ao. Ny hetsika ivelany sy ny traikefa voajanahary no fironana tamin'ny 2021, hoy izy.
Araka ny voalazan'i Caroline Bremner, lehiben'ny Travel Research ao amin'ny Euromonitor International, maharitra roa ka hatramin'ny dimy taona vao ho sitrana tanteraka ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny fianjerana vokatry ny areti-mifindra coronavirus. Ny fihodinana amin'ny 2021 dia mety mbola andrasana ho 20 ka hatramin'ny 40 isan-jato ambany noho ny 2019. Ny fanarenana dia mety hanaraka amin'ny 2022, raha tsara indrindra. Na izany aza, raha tsy hijanona ny programa fanaovana vaksiny dia mety maharitra dimy taona vao ho sitrana ilay indostria. Seho vaovao iray amin'ity taona ity ny Sustainable Travel Index, izay sambany no nampiasain'ny Euromonitor International mba hanomezana laharana ny ezaka maharitra ho an'ny toerana. Afaka nahazo ny laharana voalohany i Suède.
Araka ny voalazan'i Martin Ecknig, CEO an'ny Messe Berlin, dia fampirantiana maherin'ny 3,500 avy amin'ny firenena 120 ary koa ny solontenan'ny fampahalalam-baovao 800 sy bilaogera mpivezivezy no mandray anjara amin'ny ITB Berlin IZAO, izay virtoaly tanteraka ary hiasa hatramin'ny zoma amin'ity herinandro ity. “Faly kokoa aho fa afaka nanolotra toeram-pivoriana ho an'ny vondrom-piarahamonina mpitety faritany. Ity no fanontana virtoaly voalohany an'ny World Leading Travel Trade Show ”, hoy i Ecknig tamin'ny talata maraina. Raha ny ITB Berlin IZAO dia natokana ho an'ny mpivarotra varotra amin'ity taona ity, ireo mpanjifa noana dia afaka mahazo aingam-panahy amin'ny fialan-tsasatra ho avy ataon'izy ireo ao amin'ny Berlin Travel Festival. Ny hetsika mpiara-miombon'antoka dia mitranga mifanindran-dàlana amin'ny ITB ary koa amin'ny endrika virtoaly iray manontolo. Isaky ny hariva dia hifantoka amin'ny lohahevitra fitsangatsanganana tokana.
Mandritra ny fotoana maharitra, hoy i Ecknig, ny fampisehoana varotra virtoaly dia tsy afaka nanolo tanteraka ny hetsika manokana. "Noho izany antony izany, amin'ny 2022 dia te-hanambatra ireo singa manan-danja amin'ny fampisehoana varotra mivantana izahay", hoy izy. Natoky izy fa hiverina ny indostrian'ny fizahantany ary hahita làlana vaovao amin'ny ho avy.